नेपालको आर्थिक स्थिति ः फुलेको बैलुन - Prateek Daily
राष्ट्रिय ‘क’ वर्ग
नेपालको आर्थिक स्थिति ः फुलेको बैलुन
on 10:26:00 PM0Comment
नेपालको अहिलेको आर्थिक स्थिति हावाले भरिएको ‘बैलुन’जस्तो छ । अर्थात् कुनै ठोस कुराले बैलुनलाई ठूलो नपारेझै नेपालको अर्थतन्त्रको आकारलाई पनि उद्योग एवं कृषि क्षेत्रमा भएको विकासले नभएर रेमिट्यान्सले ठूलो पारेको छ । हुनत नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो पार्नमा व्यापार र पर्यटनको पनि केही योगदान छ तर नेपालका बजारहरूलाई गुलजार गर्नमा रेमिट्यान्सको भूमिका भने सर्वाधिक महŒवपूर्ण छ । गाउँ, शहरका जग्गाको मूल्य अप्रत्याशितरूपले वृद्धि गराउनमा र सुन, चाँदीको मागलाई गगनचुम्बी तुल्याउनमा रेमिट्यान्सको ठूलो हात छ । यसैगरी विदेशबाट आयातित विलासी वस्तुहरूको माग वृद्धि गराउनमा पनि रेमिट्यान्सले अहम् भूमिका खेलेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको राम्रो उपयोग गर्नु, त्यहाँ पुगेर धेरै आय आर्जन गर्नु राम्रो कुरा हो । तर त्यहाँबाट ल्याएको पैसा आयातित वस्तु खरीद गर्न बढी खर्च गर्नु राम्रो होइन । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । हामी अहिले निर्यातको तुलनामा निकै ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेका छौं । अर्थात् देशले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्सको प्रयोग आयातित वस्तुको भूक्तानीमा भइरहेको छ ।
प्रश्न यो उठ्छ कि किन हामी निर्यातको तुलनामा बढी आयात गरिरहेका छौ त ?
हामीले रेमिट्यान्सको प्रयोग (लगानी) कृषि एवं उद्योगको विकासमा नगरेर अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिरहेका छौं र परिणामस्वरूप राष्ट्रिय उद्योग एवं कृषिले देशले माग गरे अनुसारको परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । भन्ने हो भने २०४६–४७ पछि, मुलुककले उदार अर्थतन्त्र नीति अवलम्बन गरेपछि, उद्योगहरूको स्थापनामा जुन स्तरमा विस्तार हुनुपथ्र्यो त्यो स्तरमा हुन सकेन । कृषि क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेन । कृषि केवल जीवन निर्वाहका लागि सीमित हुन पुग्यो । उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिएन । यी कारणहरूले गर्दा हामीले दैनिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरू जस्तै चामल, दाल, तेल, तरकारी, साबुन, मसला, इन्धनजस्ता राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा उत्पादन गर्न सकेनौ र यस्ता वस्तुहरू पनि ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात गर्ने स्थितिमा पुग्यौं । अर्कोतर देशमा कृषि एवं उद्योगमा आएको सुस्तताको कारण निर्यातको परिमाणमा पनि वृद्धि गर्न सकेनौं । हाम्रो निर्यात व्यापार निराशापूर्ण छ ।
हामीले विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाएर कमाएको पैसा कसरी विदेश (खासगरी भारत) मा नै फर्किरहेको छ भन्ने कुराको एउटा सामान्य उदाहरण हेरौं । आव २०७३–७४ र २०७४–७५ मा नेपालले क्रमशः ७,३०४.९ र ८,१६३.३ करोड रुपियाँ बराबर निर्यात गरेको थियो भने सोही अवधिमा आयात क्रमशः ९९,०११.३ र १२४,२८२.७ करोड रुपियाँ बराबर गरेको थियो । सोही अवधिमा भारतबाट क्रमशः ६३,३६७. ० र ८०,९८१. ४ करोड रुपियाँ बराबर आयात भएको थियो । यसरी नेपालले उक्त दुई वर्षमा क्रमशः ९१,७०६.४ र ११६,११९.४ व्यापार घाटा बेहोरेको थियो । यो व्यापार घाटा सामान्य होइन ।
माथिको उदाहरणबाट के देखाउन खोजिएको हो भने यदि हामीले राष्ट्रिय उपभोगका लागि स्वदेशमा नै विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्न सकेको भए यति ठूलो परिमाण (माथि उल्लिखित) को आयात गर्नुपर्ने थिएन । यति ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु नपरेको भए हामीले विदेशबाट आर्जन गरेर ल्याएको आम्दानीबाट राम्रो बचत (राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सदुपयोग गरेर) हुने थियो ।
हामीले रेमिट्यान्सको प्रयोग नेपालमा उद्योगहरूको विकासका लागि गर्नु नितान्त आवश्यक छ । यस किसिमबाट अहिले जस्तो, देशको अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी (निर्यात ज्यादै कमको स्थितिले) पारेर देशलाई दीर्घकालमा कुनै फाइदा छैन । देश कालान्तरमा गरीब हुन्छ । देशमा उद्योग र कृषिको विकास नभएमा विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा (बढी आयातले गर्दा ) विदेशमा नै फर्केर जान्छ । जुन अहिले भइरहेको छ ।
हामीले स्वदेशमा नै ठूलो परिमाणमा वस्तुहरू उत्पादन गर्ने हो भने आयातको परिमाणमा कमी मात्र आउँदैन, मुलुकमा कृषि एवं उद्योगको क्षेत्रमा विकास हुन पुगेर रोजगारका अनेक अवसर पनि सृजना हुन्छ । धेरै व्यक्तिले रोजगार पाउँछन् । धेरै व्यक्तिको क्रय शक्तिमा वृद्धि हुन्छ । र यसरी मुलुकको गरीबी पनि कम हुन्छ ।
स्मरण रहोस, हामीले कम मूल्य मात्र होइन, उच्च मूल्यका वस्तुहरू पनि अति नै आयात गर्छौ । यसले गर्दा पनि हाम्रो व्यापार घाटाको आकार ठूलो हुन पुगेको हो । खासगरी हामीले भारतबाट उच्च मूल्यका वस्तुहरू जस्तै ट्रक, बस, ट्याक्टर, मिनिबस, भ्यान, कार, मोटर साइकल, मेशिन, औजार, उपकरण आदि ठूलो सङ्ख्यामा आयात गर्छौं । र प्रत्येक वर्ष गर्छौं । जबकि हामीले भारतलाई कम मूल्यका वस्तुहरू मात्र निर्यात गर्छौं । भारतसँग हाम्रो यो व्यापार साझेदारीमा हामीलाई ज्यादै कम, भारतलाई धेरै फाइदा भएको छ । यो स्थितिको लागि हामीले भारतलाई होइन, आफैंलाई दोषी मान्नुपर्छ ।
नेपाल अटोमोबाइल (कार, ट्रक, बस आदि) को राम्रो बजार भएको सन्दर्भमा हामीले स्वदेशमा नै कार, ट्रक, बस उत्पादन गर्दा राम्रो हुने हो । तर उत्पादन गर्न सकेका छैनौं र ठूलो सङ्ख्यामा भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । नेपालमा दिन प्रतिदिन कार, बस, ट्रक आदिको मागमा वृद्धि भएको, यी साधन प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या पछिल्ला वर्षमा ह्वात्तै बढे तापनि हामीले सवारीका साधनहरू स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । स्वदेशमा नै सवारीका साधनहरू उत्पादन गरेर, व्यापार घाटा कम पार्ने, रोजगार सृजना गर्ने अमूल्य अवसर गुमाइरहेका छौं । यसरी हामीले रेमिट्यान्सको प्रयोग केवल आयातित वस्तु खरीद गरेर, आयातित वस्तुहरूको प्रयोगबाट देशमा आर्थिक विकास भएको भान पारेर, नेपालको अर्थतन्त्रलाई फुकेको बैलुनझैं पारेका छौं । यदि बैलुनबाट हावा गएमा बैलुन च्याउरिन पुगेझैं, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपालले रेमिट्यान्स ल्याउन नसके नेपालको अर्थतन्त्र पनि बैलुनझंै च्याउरिन सक्छ । तर यो स्थितिबाट जोगिन आवश्यक छ ।
माथि उल्लेख गरिएको स्थितिबाट जोगाउन वा नेपालको अर्थतन्त्रलाई बैलुनझैं खुम्चिन नदिन नेपालमा उद्योगहरूको स्थापना गर्न अति आवश्यक छ । वर्तमानको कृषि अवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।
नेपालमा उद्योग एवं व्यापारको विकास गर्न अनियमन (मभचभनगबितष्यल) मा जोड दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अनेक किसिमका झन्झट र ढिला सुस्ति (दगचभबगअचबअथ) उत्पन्न गराउने व्यापार नियम खारेज गर्दै उद्योग, व्यापार सञ्चालन गर्न व्यापारीलाई सजिलो हुने वातावरण तयार पार्न जरूरी छ । सजिलो र कम नियम–कानूनको व्यवस्था गरेर व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्न सजिलो हुने अवस्था सृजनन गर्नुपर्छ, किनभने देशलाई धनी तुल्याउने (बढी कर भुक्तान गरेर ) कार्य व्यापारीहरूले गर्ने हो, कर्मचारीहरूले गर्ने अति नियमन (तष्नजत चभनगबितष्यल) कार्यले होइन ।
निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष व्यापारीहरू सम्मिलित राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्ने थियो तर गर्न सकेको छैन । त्यस्तो सम्मेलन गराएर व्यापारीहरूको राय सल्लाह सुन्नुपथ्र्यो तर सुनेको छैन ।
२०७६ माघको प्रतीक दैनिक
पोखरिया नगरपालिकाको काम उपभोक्तालाई योजना खप्टाएर गोप्यरूपमा ३२ लाख भुक्तानी
प्रस, वीरगंज, ७ माघ/ पोखरिया नगरपालिकाले आव २०७५/०७६ को सडक बोर्डको रकम अनियमित ढङ्गले लगानी र गोप्य ढङ्गले भुक्तानी गरेको समाचार छ...
२०७६ माघ ०८ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
२०७६ माघ ०९ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
२०७६ माघ १२ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
२०७६ माघ १० गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
२०७६ माघ ०७ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
२०७६ माघ ११ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
सेनाले छोडेपछि सुरक्षाको पर्खाइमा सखुवाप्रसौनी
प्रमोद यादव, पंचगावाँ, ५ माघ/ विगतमा द्वन्द्वको बेला पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका वडा नं २ श्रीपुर पंचगावाँ बजारमा नेपाली सेनाको सु...
सवारीकर पुनः विवादमा
प्रस, वीरगंज, ८ माघ/ वीरगंज महानगरपालिकाले ठेक्कामार्पmत् सङ्कलन गरिरहेको सवारीकर पुनः विवादमा आएको छ । महानगरपालिकाले ठेक्कामा लग...
के हो गुणस्तरीय शिक्षा ?
अनन्तकुमार लाल दास के हो गुणस्तरीय शिक्षा ? यो प्रश्न वर्तमानमा हुने हरेक शैक्षिक गोष्ठी, सेमिनार, बहस आदिमा निरन्तर उठ्ने गरेको छ। प...
Archive January (296) December (320) November (365) October (338) September (377) August (403) July (415) June (394) May (406) April (361) March (312) February (381) January (344) December (217) November (182) October (176) September (197) August (199) July (232) June (250) May (212) April (209) March (199) February (213) January (213) December (238) November (208) October (194) September (213) August (198) July (207) June (234) May (224) April (234) March (232) February (274) January (317) December (305) November (255) October (269) September (287) August (241) July (272) June (276) May (265) April (243) March (266) February (253) January (206) December (206) November (233) October (212) September (274) August (228) July (203) June (191) May (218) April (213) March (191) February (209) January (225) December (245) November (184) October (163) September (164) August (178) July (173) June (169) May (168) April (177) March (194) February (161) January (208) December (198) November (149) October (148) September (175) August (201) July (208) June (200) May (218) April (168) March (193) February (194) January (202) December (226) November (186) October (231) September (229) August (199) July (197) June (160) May (192) April (199) March (276) February (627) January (235) December (183) November (158) October (139) September (144) August (149) July (130) June (142) May (132) April (133) March (107) February (139) January (160) December (158) November (132) October (149) September (185) August (166) July (154) June (135) May (33)